Line Rafaa Fariin Japanese si loo bilaabo sarrifka cryptocurrency a
adeega fariimaha ugu weyn ee Japan ayaa ku dhawaaqay maanta – qorshayaasheeda si ay u bilaabaan iyo shaqeeyaan sarrifka cryptocurrency a, in in karti loo gudahood codsiga ay chat in ka mid ah xoojisay ay 200 milyan bil kasta dadka isticmaala firfircoon dunida oo dhan.
The app chat ku salaysan Tokyo ayaa xaqiijiyay in uu gudbiyay codsi Hay'adda Adeegyada Maaliyadda (FSA) - jaangooyaha dhaqaale Japan ee - in ay diiwaan-iyo bilowdo sarrifka cryptocurrency a. Codsiga waxaa iminka dibufiirin.
initiative Rafaa fariimaha ee si ay u bixiyaan ganacsiga cryptocurrency yimaado garab bilaabay shirkad cusub oo lagu magacaabo Financial Line, kaas oo sidoo kale u eegin doonaa bixiya adeegyada maaliyadeed si dadka isticmaala.
Line Financial socota Line xawaaladaha iyo adeeg bixinta Line ee hore u-caan mobile Pay, adeeg karti gudahood Line ee app Fariin. In 2017, pay Line kaalinta 40 milyan oo caalami ah users ka diiwaan gashan mugga macaamil sanadlaha aad iyo aad u ¥ 450 billion ($4.1 billion).
Seeraar sarrifka Huobi US furi doonaa xafiiska
Ku salaysan Shiinaha Huobi, hore mid ka mid ah is-weydaarsiga ugu weyn cryptocurrency ee dalka, ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo xafiis ee San Francisco.
Madaxa Strategy cái Kailong yiri “Huobi ayaa doonaya in uu caalamka u koraan… xoreeyo dalka ah. noo noqonaysaan diiradda hadda.”
Huobi la dhiso xarunta cusub ee degaanka Valley Silicon ah, sifeeyay riix mid ka mid ah dhaqso badneyd, sida uu sheegay Afhayeen u hadlay shirkadda.
bishii la soo dhaafay, Huobi dhawaaqday in ay kaashanaya shirkadda maalgelinta SBI Group ay u bilowdo labo ka mid ah is-weydaarsiga cryptocurrency ee Japan si ay u bixiyaan adeegyo yen-ku saleysan.
SBI lacagaha Virtual iyo Huobi Japan aan ku dhawaaqay kasta waqtiyada adag furayey ay ka soo jeedaan.
Wasiirka Maaliyada South Korea ee: No qorshaha in la mamnuuco cryptocurrencies
Wasiirka Maaliyada South Korea ayaa sheegay in xukuumaddu ay inuusan qorsheyneyn inuu ganacsi cryptocurrency xiray, news dhaweyn maal welwelsan tahay in maamulka tagaan sidii ay uga tallaabo adag Shiinaha ee ka xanibeen dhufto ee qadaadiic dalwaddii.
comment The by Kim Dong-yeon on Wednesday yimaado sida ganacsatada guriga iyo adduunka oo dhan ayaa la spooked by comments-khilaafsan ka tirsan dowladda South Korea, xarun weyn oo ganacsiga cryptocurrency, in Seoul ayaa la qorsheynayo in la mamnuuco is dhaafsi qadaadiic digital degaanka.
"Ma jirto ujeeddo in la mamnuuco ama loo xakameeyo cryptocurrency (suuqa),"Ayuu yiri Kim, isagoo intaa ku daray hawl deg-deg ah ay xukuumaddu waa in ay sharciyaynta is dhaafsi.
Xoojinta ujeedada Seoul ee in la adkeeyo boolal ee suuqa si aad ah loo arkaa in uu yahay Doolaal iyo khatar by siyaasadda caalamka, caadooyinka dalka ee horaantii on Wednesday shaacisay in ay qaawiyey ganacsiga sarifka lacagaha qalaad cryptocurrency sharci-darrada ah ku kacaya ku dhawaad $600 million.
"Adeeg Customs ayaa si dhow u eegayaan ganacsiga sarifka lacagaha qalaad sharci-darro ah oo isticmaalaya cryptocurrency oo qayb ka ah ciidamada hawsha dawladda ee,"Ayaa lagu yiri.
Blockstream bilawday tokenized ...
Post Previous:Sidee si ay u noqdaan sameeysa a blockchain
Post Next:Sida loo sameeyo ICO ah ee Switzerland